Komandooska dowladda oo yeeshay taliye cusub « AYAAMO TV
Komandooska dowladda oo yeeshay taliye cusub
740 Views Date March 6th, 2014 time 5:15 pm
Taliska Ciidanka XDS ayaa ku hanjabay in cadowga ummadda Soomaaliyeed uu dareemi doono culeys uga yimaada ciidamada Kumaandooska, isagoo magacaabay taliye cusub oo hogaamiya ururka Kumaandooska.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi ayaa sheegay in goor dhow dalka oo dhan uu ka bilaabandoono howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah si dalkeena looga dhigo meel ka caaggan argagixisada.
Gen. Daahir Aadan Cilmi taliyaha ciidanka XDS ayaa tilmaamay in ururka Kumaandooska ee ciidanka xoogga dalka ay u dhanyihiin tababar iyo qalab intaba wuxuuna ku gooddiyay in ciidamada XDS ay dalka oo dhan ka xoreyn doonaan argagixisada Alshabaab.
Col. Xasan Maxamed Yuusf oo ah taliyaha cusub ee ururka Kumaandooska ee ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada Komandoska ay qabaan tababar wanaagsan, isagoo xusay in shalay lagu wareejiyay qalabkoodi oo dhan.
Taliyaha ciidanka Komaandooska ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ku diirsandoonaan dhabaj jabka ay ciidamada Komaandooska u geysandoonaan cadowga argagixisada ah ee dalkeena ku soo duulay.